Uzinzo lwe-Atmospheric kunye noKhuseleko
Uzinzo lwe-Atmospheric: Ukukhuthazwa okanye ukuThoxiswa kwamaPhupho
I-Stable Atmosphere = Imozulu engekhoyo
Ukuzinza (okanye ukuzinza kwezulu) kubhekisela ekuthambekeni komoya ukunyuka nokudala iziphepho (ukungazinzi), okanye ukunqanda ukunyakaza okuhambayo (ukuzinza).
Indlela elula yokuqonda indlela ukuzinza kusebenza ngayo ukucinga i-epelesi yomoya enekhava elincinci, eliguquguqukayo elivumela ukuba likhule, kodwa likhusela umoya ngaphakathi ekuxubeni nomoya ojikelezayo-njengokuba kunjalo nebholethi yeqela. Emva koko, cinga ukuba sithatha ibhaluni size siyinyanise .
Ekubeni uxinzelelo lomoya luyancipha ngokuphakama, ibhaluni iya kuphumla kwaye ikhule, kwaye ukushisa kwayo kuya kuncipha. Ukuba iplasela yayipholile kunomoya ojikelezayo, kuya kuba nzima (kuba umoya opholileyo ukhulu kunomoya ofudumeleyo); kwaye ukuba avunyelwe ukwenza njalo, iya kuhlahlela phantsi. Umoya wololu hlobo kuthiwa uzinzile.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba sasiphakamisa ibhaluni yethu engqondweni kunye nomoya ngaphakathi kuwo wawushushu, kwaye ngoko ke, uncinci kunomoya ojikelezayo, wawuya kuqhubeka ukuphakama de ube ufikelele kwindawo apho ukushisa kwawo kunye neendawo ezikuyo zilingana. Olu hlobo lomoya luhlelwa njengoluzinzileyo.
Iingxowa zokuphambuka: Ukulingana kozinzo
Kodwa i-meteorologists ayifuni ukubukela indlela yokuziphatha ngayo ibhaluni rhoqo xa befuna ukwazi ukuzinza kwemoya. Bangakwazi ukufika kwimpendulo efanayo ngokulinganisa ukushisa kwemoya ephezulu kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo; le niselo ibizwa ngokuba yintsikelelo yezinga lokusingqongileyo (igama elithi "ukuphulukana" elibhekiselele ekunciphiseni kweqondo lokushisa).
Ukuba izinga lokulahleka kwemvelo liphezulu-njengokuba kunjalo xa umoya ophantsi komhlaba ufudumele kakhulu kunomoya ophezulu-ke umntu uyazi ukuba umoya awuhlali. Kodwa ukuba isantya esiphumelelayo sincinci, oku kuthetha ukuba kukho utshintsho oluncinci lokushisa, luphawu olufanelekileyo lwemoya ezinzile.
Iimeko ezizinzileyo zenzeke ngexesha lokushisa kweqondo lokushisa xa kubanda ukushisa (kunokuba kunciphise) ngokuphakama.
Indlela elula yokufumana ukuzinza kwemoya kwikhangela ngokusebenzisa isandi sezulu.
Ehlelwe yiTiffany Means
Umehluko phakathi kweSigaba kunye noMbuso weNdaba
I-Biology Prefixes kunye neSaffixes: angio-
Kuphi i-Mercury efunyenwe kwiTable Periodic?
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: i-hem- or hemo- okanye i-hemato-
Izibane Zisebenza Njani?
Izikhokelo Zokuqhawula iziThuthi zeScuba zokuLawula iikhowudi
Yintoni iMilake kaClakeke?
Ubufazi ku "Dick Van Dyke Show"
I-Classic Classic i-Hudson Movies
Iingcebiso zokuKhutshwa kweRhafu zoTitshala abahlawula iiNkxaso zamaCandelo
Qhubeka usebenzisa ii-Letters Capital
Bala inani elichanekileyo leentsuku
Impembelelo yoRace on Friendships of Children
Isifundo sovavanyo lwemibuzo
UkuCwangcisa iTycle Downs
Ziziphi iingxaki zokunqoba iLottery?
Ukufumana isingqino kwizobuGcisa bobuGcisa
Isingeniso kwiMfazwe yeNgqondo
Iinkcazo: Umtshato we-Gay awukwazi ukuba yinyani?
Itheyibhile yePeriodic of Element Groups
Yintoni i-Economics International?
Iyini i-Jazz Music yasekuqaleni?
Ukujonga i-Biender Bias kuMbutho